यी हुन् आजबाट खुला गर्न मिल्ने सेवा तथा कार्यहरू - News20 Media
यी हुन् आजबाट खुला गर्न मिल्ने सेवा तथा कार्यहरू
June 11, 2020 June 11, 2020 N20LeaveaComment on यी हुन् आजबाट खुला गर्न मिल्ने सेवा तथा कार्यहरू
काठमाडाैँ, २९ जेठ । सरकारले पहिलाेपटक लकडाउन खुकुलाे पारेकाे छ । गत चैत ११ गतेबाट सुरू भएकाे लकडाउन ७८ दिनपछि खुकुलो बनाउने निर्णय बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको हो । आजबाट पहिलो चरणकाे लकडाउन खाेलिने भएकाे छ । र, यस अन्तरगत २१ दिनमा २१ सेवा खुल्ने बताइएकाे छ । जसमा अत्यावश्यक सेवासहित निजी सवारी, ट्याक्सी, पसल, व्यवसाय समेत रहेका छन् ।
निजी सवारीसाधन जोर-बिजोर प्रणालीमा निश्चित मापदण्ड पूरा गरी निश्चित नाकाभित्र मात्र सञ्चालन गर्न अनुमति हुने जनाइएकाे छ । उपत्यकामा निजी सवारी साधनहरु जोर–बिजोरका आधारमा चल्न दिने पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । निणर्यानुसार दुई पांग्रेमा १ जना, चार पांग्रेमा ड्राइभरसहित ३ जना मात्रै सवार हुन पाउने भएको छ ।
तर लामाे दूरीका सवारी भने तत्काल खुल्ने छैनन् । साथै शैक्षिक संस्थाहरू (स्कुल, कलेज), रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, सिनेमा हल, शपिङ मलजस्ता बढी भीडभाड हुने क्षेत्र पनि तत्काल खाेल्पन पाइने छैन । महाेत्सव, जात्रा, कार्यक्रम पनि गर्न पाइने छैन । अन्तर्राष्टिय उडान समेत खुल्ने छैनन् ।
पहिलो चरणमा भोलिबाट खुल्ने सेवा र कार्य:
१) स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित सबै सेवा, निजी क्लिनिकसमेत २) औषधि, खाद्य तथा पेयपदार्थ, तरकारी, फलफूल, दुग्धपदार्थ, अन्डा, माछा, मासु, खानेपानी उत्पादन, बिक्रीवितरण तथा ढुवानी ३) पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी र बिक्रीवितरण ४) फोहोरमैला व्यवस्थापन ५) विद्युत, दमकल, एम्बुलेन्स, सञ्चार तथा प्रसारण, हुलाक सेवा
६) बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी र बिमा सेवा ७) सबै प्रकारका कृषि तथा पशुपन्छी पालनसम्बन्धी कार्य ८) कृषि बीउ बिजन, रासायनिक मल, कृषि औजार र शीतभण्डारसम्बन्धी सेवा तथा कार्य ९) उत्पादनशील उद्योग १०) निर्माण सामग्रीसम्बन्धी उद्योग व्यवसाय ११) विकास आयोजना (निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धितसमेत)
१२) निर्माण कार्य (निजीसमेत) १३) नदी तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन्, संकलन, ढुवानी र बिक्रीवितरण १४) रेस्टुरेन्टबाट हुने प्याकिङ तथा टेकअवे सेवा १५) क्वारेन्टिनका लागि तोकिएका होटल १६) बिजुलीका सामान बिक्री र मर्मत १७) विद्युतीय उपकरण, मेसिनरी र सवारी साधन मर्मत गर्ने वर्कसप
१८) पुस्तक पसल तथा स्टेसनरी १९) सबै प्रकारका ढुवानी सेवा २०) अत्यावश्यक सेवाका कार्यालय २१) अन्य सरकारी कार्यालय, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका कार्यालय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू (सामान्यतया ५० प्रतिशत कर्मचारी रहने गरी)
एसईई परीक्षा नगर्ने सरकारकाे निर्णय : आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा प्रमाणपत्र दिइने
उपप्रधानमन्त्रीको सपथ खाएको सेलाउन नपाउदैँ राजेन्द्र महतो तानिए विवादमा, एमालेकै नेताहरुद्धारा गम्भीर आपत्ती प्रकट !
माधव नेपालले राजनीतिक जीवनकै कठोर निर्णय लिदैँ, कोद्धारा परिचालित छन त ?
एसईईको नतिजा सार्वजनिक हुने मिति बाहिरियो, यसरी हेर्नुहोस्
June 14, 2021 June 14, 2021 N20